साक्षीको माध्यमबाट नियमनकर्ता मार्टिन व्रिजल्याण्ड (नाओमी हग्वेवीज) को गवाह गर्ने माध्यमबाट नियन्त्रित वैकल्पिक मिडियाको थप प्रमाण: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	5 मई 2019 मा	• 42 टिप्पणिहरु
धेरै लेखहरूमा मैले व्याख्या र मानहानि अनलाइन कसरी पत्ता लगाएको छु भनेर मेरो कर्मचारीले राज्यको कर्मचारी जेरोन हुग्वेइजीजद्वारा समन्वय गरेका थिए। उसले यो प्रतिशोधको साथ गर्न सक्छ, किनकी मेरो घोषणाहरु संग केहि गरेन। तिनीहरू आज सम्म पाइपलाइनमा छन् र एक वकील जसले यो काम गर्न चाहँदैनन्। Google खोजी सूचीबाट लिङ्कहरू हटाउने प्रयास पनि अज्ञात रूपमा छोडेर GDPR कानुनीकरणको बावजूद सम्पूर्ण युरोपमा लागू हुन्छ बाहेक अस्वीकारको लागि नेतृत्व।
यो स्पष्ट छ कि कुनै व्यक्ति जसले नियन्त्रित वैकल्पिक मिडिया फोर्स क्षेत्रसँग सम्बन्धित गर्दैन भने आक्रमण गर्न र ब्ल्याक थियो। निस्सन्देह, अन्य राम्रा ज्ञात वैकल्पिक मिडिया च्यानलहरूमा शम हमलाहरू पनि हुन्छन्, तर त्यसो गर्दा यो वांछित विषयहरूमा ध्यान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गरेको हुन्छ। यो सकल श्रेणीको कहिल्यै हो जुन अन्तर्वार्ता प्राप्त भएको थियो, भित्री नाम र मेरो छोरीको प्रकाशन पनि।
यस लिबेल र मानहानि को स्रोत को थाहा थियो कि उनले एक नयाँ पहिचान स्वीकार गर्नेछन्, किनकी यस पछि धेरै नहीं यस Aleister Crowley समर्थक र आरटीडी पुजारी जेरोन हग्वेवीज ले आफु मा एक महिला को रूप मा परिवर्तित गरे, ताकि उनि जीवन को नाओमी हग्वेवीज भनिन्छ। यो सबै समय यो चरित्र इन्टरनेट मा धेरै सक्रिय छ र jalta.nl जस्तै कार्यकर्ता वेबसाइटहरु मा लेखक को रुपमा स्थान हो। नाओमी ट्रांसगेंडरवाद को बढावा मा धेरै सक्रिय छ, जो एक आरटीडी पुजारी को लागि एक अजीब विकल्प छैन, किनकी लुसिफेरियन शिक्षण लिंग परिवर्तन एजेंडे को रोल आउट को घूमती छ; हेरोफेरोडाइट Baphomet (पूजाका लागि लूसिफर) को उपासनालाई जोड दिन। अक्सर यो शैतानिकता र शैतानको महिमा संग उलझन हुन्छ, तर ईश्वर / शैतानको उदाहरण द्विवादमा आधारित छ जुन अन्तिम लक्ष्य पुग्न एक उपकरण हो। कोरमा लुसिफर उपासना गरिन्छ; तर त्यो ठूलो रहस्य हो। यही कारणले उनीहरूले गोप्य समाजलाई पनि भनिन्छ, किनकि यस्तो कुरो धाराहरू उनीहरूको रहस्यमा निर्भर छन् र तपाईं प्रारम्भ र रैंक्सद्वारा संगठनमा बढ्न सक्नुहुन्छ। उच्च स्थान, अधिक तपाईं रहस्य जान सक्छ।
केही समय पहिले (नोभेम्बर 2017) म एक ट्रान्ससेक्सुअल द्वारा सम्पर्क गरिएको थियो जो भन्छन् कि उनी जेरोन हग्वेवीजलाई नाओमी हग्वेईजीजको रूपमा जान्छन्। उनले उनलाई रोटरडैममा 'मानव अधिकार' को 'ट्राभल महिला' को लागि समर्थन समूहबाट जान्दछन्। यस तरिकाले मलाई यस शक्तिको पनको कार्यको दिशामा एक झलक पायो जुन वर्षौंका लागि मार्टिन व्रिजल्याण्डलाई पराजित गर्न काम गरे। तल पढ्नुहोस्:
विषय: नाओमी / जेरोन हुगोवेजिज
निम्न म तपाईंलाई गोप्य रूपमा लेख्छु।
म एक स्किडाम ट्रान्सगेंडर हुँ, एक जना पुरुष जसले महिला जस्तो महसुस गर्छ र मेडिकल (डीएनए) अनुसन्धानको विषय हो।
संयोगवश, मैले पनि वर्णन गरेको ट्रान्सगेंडर नाओमी / जेरोन होगवेजसँग परिचित भए। फिर्तामा, मेरो लागि खुशी थिएन।
म एक 63 वर्षीय ट्राग्गेंडर हुँ, जो वर्षको लागि 39 मा विवाहित भएपछि पछि यो वर्ष मेरो साँचो स्वभावमा प्रवेश गर्न थाल्यो। मेरी प्रिय पत्नीले यो पूर्ण सहयोग गर्दछ र हामी सँगसँगै बसिरहन्छौं।
एलेस्टर क्रोले र तिनका समर्थकहरूको संख्याको वरिपरि सबै छायाहरूसँग कुनै गर्न छैन। मलाई विश्वास र शैतानको साथ केहि पनि छैन। म बुझ्छु, तथापि, कि Templar आदेश सबै प्रकारका अँध्यारो चीजहरूसँग सम्झौता गर्दछ।
यो नाओमीको लागि: मैले रोटरडैममा 'टाइट महिला' को मानवअधिकारका लागि एक समर्थन समूहमा भेटें र त्यो सुरुमा राम्रो लागेन। जब यो पछि फर्कियो कि हामी एकअर्काको नजिक बोल्दै थियौँ, हामी घरमा एकअर्कालाई पनि सुरू गर्न थालें। म (र मेरी श्रीमती, रास्ते) को नाओमी राम्रो तरिकाले जान्न पाएको थियो र उनीहरु लाई केहि व्यवहारमा बिचित्रै लागेका थिए, तर मैले यसलाई प्रदान गरें, किनकी उनले मलाई प्रशोधन र केहि विषयहरु को बारे मा उनको ज्ञान को बारे मा धेरै पढाए। तथापि, उनी धेरैजसो मित्रतावादी, सर्ली भए र अन्ततः त्यो फेसबुक मार्फत मेरो राय दिएपछि, उनले मलाई पूर्णरुपमा परास्त गरे भने उनी सहमत भएनन्। एक निश्चित बिन्दुमा मलाई साँच्चै निराश लाग्यो र मैले सम्पर्क समाप्त गरें। उनले मलाई क्षतिपूर्ति गरे र मलाई दोषी ठहर्यो।
पुनःप्राप्तिमा, म बुझ्छु कि मैले उनको भ्रमण गरें, किनभने ट्रान्सगेंडरको रूपमा जीवन सधैँ सजिलो छैन र ट्रान्सगेंडर व्यक्तिलाई पतला बोकाइन्छ। सारमा, तथापि, हामी पूर्णतया असंबद्ध आत्माहरू थिए। नाओमी केहि हद सम्म खतरनाक, उत्तेजित ट्रांस आइतबार हुन को लागी बाहिर जान्छ, जसले उनको अधिक मजेदार प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को छ कि कसरि जान्छ कि बेशक सबै पुरुषहरु लाई त्यहि तरिका को छान्न को लागि कसरि जान्छ। परिणाम यो हो कि म उनको र उनको साजिश द्वारा हेरफेर गरिएको थियो र म त्यो ट्रांटीफर्म देखि रोटरडैम मा फेंकयो। म दुई अन्य ट्रान्सगेंडर व्यक्तिबाट जान्दछु कि उनले पनि जीवन दुर्व्यवहार गरे र त्यो अब उनको साथ सम्पर्क छैन। यो मलाई लाग्छ कि यो यस कमजोर समूहको लागि खतरा हो।
मैले मेरो घरको छिमेकीबाट पनि सुनेँ कि उनको बारेमा पुलिस फाइल थियो। त्यहाँ pedophilia को अफवाह थिए। मलाई थाहा छैन कि यो सत्य हो। कुनै पनि अवस्थामा, म विश्वास गर्छु, आंशिक रूपले गर्दा नाओमी इन्टरनेटमा लगाउने काम गर्दछ, त्यो केहि गलत छ।
मलाई ती सबै भेदभावहरूमा मैले मारेको थियो कामुकता र कामुकताको बारेमा निरन्तर विवेकपूर्ण कुरा र अधिवेशनको चरम रूप थियो।
जब म सँगै सबै केहि जोड्छु, म कसैको साथमा गम्भीर मनोविथिक लक्षणहरु संग समाप्त हुन्छु, तपाई को लागी हेर्न चाहन्छु।
त्यसैले म बुझ्न सक्छु कि तपाईसँग यस व्यक्तिसँग धेरै समस्याहरू छन्। तपाईंको कामको साथ शुभकामना!
दयालु सम्बन्धको साथ,
अब मैले यी इ-मेलहरू प्रकाशित गर्न एक लामो समय पर्खेको छु, किनकि प्रश्नमा व्यक्ति नाओमी हुग्वेइजको डराउनु पर्छ। अझै थप जानकारी आयो, जो किमियो केवल कसैलाई मात्र होइन। त्यसैले मलाई यो इ-मेलमा मेरो प्रतिक्रिया थप्न दिनुहोस्। मैले तल पाएको उत्तर देखाउँछु। त्यस जवाफमा, यो देखिन्छ कि नाओमी इजरायल सेनाद्वारा प्रशिक्षित गरिएको थियो।
तपाईंको खुल्लापनको लागि धन्यवाद। प्रायः अवस्थित छाप भनेको हो कि म समलिङ्गी अभिविन्यास वा ट्राजीगिन्डर व्यक्तिहरूको विरुद्धमा मान्छे विरुद्ध केहि हुनेछ। त्यो छाप मुख्यतः यो जेरोन (जसलाई उनी भनिन्छ) हुग्वेइज द्वारा बनाईएको थियो। मेरो कुनै पनि व्यक्तिको विरुद्ध कुनै पनि छैन र म राम्रो कल्पना गर्न सक्दिन कि मान्छे उनीहरूको लिङ्गको बारेमा भ्रमित हुन्छन्। वास्तव मा: एक राम्रो तरिकाले ज्ञात साइट छ जो मलाई धेरै पछ्याउँछ र मलाई लेखहरू दोहोर्याउँछ ट्रान्सगेंडर द्वारा व्यवस्थित गरिन्छ।
तपाईंको र नाओमीबीचको भिन्नता भनेको हो कि उनले सम्भवतः उनको ट्रान्सगेंडर छनौट गरेन किनभने पुरुष पुरुषमा महिलाको भावना महसुस गर्यो। उनको मामला मा, यो सबै भन्दा अधिक संभावना लूसफरियन / Crowley विश्वास को आधार मा एक विकल्प हो। त्यो आफैमा पनि एक विकल्प छ कि सबैलाई चयन गर्न नि: शुल्क छ, तर यस अवस्थामा त्यहाँ साँच्चिकै एक प्रकारको कट्टरवादवाद हो कि यो तीव्र तीव्र छ।
व्यक्तिगत रूपमा, जेरोनको हातबाट ग्रंथहरूको निन्दा र विवेकले मलाई एकदम थोडा खर्च गर्छ। उदाहरणका लागि यो तथ्यको कारण छ कि मैले अब मेरो छोरीलाई देखिनँ। त्यो धेरै पीडा छ। यो पनि कारण हो कि म आफ्नो घर र मेरो दिल गुमाएको छ र फेरि समाज मा एक सामान्य काम पाउन सक्दिन।
यदि तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु यदि मैले सम्भवतः तपाईंको गवाहीमा गम्भीर रूपमा प्रकाशित गर्न सक्दछु / वा अदालतको मामलामा यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछु कि म अन्तमा ल्याउन सक्ने आशा गर्दछु।
यदि तपाइँ यस बारेमा अरु चीजहरू साझा गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसपछि यहाँ मेरो प्रतिक्रियाको जवाफ। निस्सन्देही, यो विचार प्रकाशित गर्न विचार गरिएको छैन, किनकि म प्रश्नमा व्यक्तिको रक्षा गर्न चाहन्छु, तर यदि यो प्रकाशनले लेखकहरूमा आक्रमणको निम्त्याउँछ भने, यो स्पष्ट हुन्छ कि कोणबाट आएको छ। यसबाहेक, यो मेरो लागि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ कि यो एक पटक बाहिर आउनु पर्छ, किनकि मेरो ठेगानामा आक्रमणको लागि कुनै पनि सुरक्षा र नबनाउँदो छैन र कसरी रेखाहरू दौडिन्छन् भनेर देखाउन पनि।
यो मेरो लागि खतरनाक लाग्न सक्छ, किनकि उनी तुरुन्तै कथाबाट बताउन सक्थे जुन यो 'अज्ञात स्रोत' को लागि हो। त्यस अवस्थामा मैले सुरक्षित महसुस गरेन। तपाइँसँग यो कसरी हटाउने बारे विचारहरू छन्?
नाओमी को बारे मा अधिक साझा गर्न चाहते हो? क्या तपाईं जान्दछन् कि उनले पहिलो इंटिफाडा को समय मा इजरायल को सेना मा सेवा गरे र त्यो सबै भन्दा अधिक संभावनाहरु लाई हथियार तोडने मा भाग लिया? उनले ती इजरायल सैनिकहरूको कार्यलाई बुझ्न उत्साहित गर्न खोजे।
के तपाईंलाई थाहा छ कि तिनी अहिले एक जना मानिसको साथ रहन्छन् जो एक पटक क्रस-बोर्ड आदेशको रूपमा आफ्नो काम गरे। उसले मलाई बुझ्न सक्छ कि कसैको गलामा काटेर कसरी। आफैँमा यो एक असमानता, तलाकयुक्त व्यक्ति (एक छोरी पनि) को लागी जस्तो देखिन्छ, जसले मलाई विश्वास गर्छ कि आर्थिक रूपमा नाओमीको रूपमा दुर्व्यवहार गरिन्छ (उनीसँग आफ्नै आफ्नै आय छैन)। यदि उनको ट्रान्सगेंडर अपरेसन भएको छ भने, उनले सम्भवतः उसलाई पठाउनेछ। मलाई विश्वास छ कि उनी लामो सम्बन्धको लागि आफ्नो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन्।
नाओमीले भन्यो कि यो भयो कि यो मानिस उनको लागि जब एक ट्रांजिस्टर को रूप मा अपमानजनक थियो उनको लागि उभिएको थियो। तिनले हिंसाको प्रयोग गर्थे। मैले यी चीजहरू आफ्नै मुखबाट सुनेको छु।
यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने, तिनीहरूलाई सोध्न नि: शुल्क लाग्छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि म यो ई-मेल एक्सचेंज मात्र यहाँ राख्न सक्छु यदि मेरो इनबक्समा यो सख्त प्रमाण छ, अन्यथा यसलाई तुरुन्तै हस्तक्षेप र निन्दाको रूपमा बोलाउन सकिन्छ र म कारावासको जोखिम लिने छैन।
नाओमी सेप्टेम्बरमा 45 बदलियो, त्यसैले उनी 1972 बाट छ। पहिलो इन्फिडाडा 1987 बाट 1993 सम्म पुग्यो र त्यसपछि जेरोन त्यस अवधिको अन्त्यमा त्यहाँ सेवा गर्नुपर्दछ। त्यो त्यहाँ त्यहाँ पूर्ण सैन्य प्रशिक्षण भएको थियो र प्रायजसो केही लडाइँका प्रविधिहरू स्कुल गर्थे जुन उनले सिकेका थिए। डच सेनालाई त्यहाँ 'चकलेट सेना' को रूपमा मानिन्छ। (त्यो यस्तो बयान संग प्रभावित गर्न मन पर्छ)।
यहूदी? सम्भवतः एक निश्चित अर्थमा: उनको अनुसार, उनी यहूदी छन्, किनभने उनको आमा यहूदी हो र यहूदी प्रथाको अनुसार यो महिला रेखासँग निश्चित छ कि यो मुद्दा हो। इजरायलमा तिनी येशव प्रशिक्षणमा थिए, जहाँ उनले सिकेका थिए कि एकअर्कालाई दस्तक दिंदा 'तपाईं भन्दा राम्रो' हुनेछ।
मैले विकिपीडियामा यो नोटिस गरे: "Hesder jesjiva
इजरायलमा त्यहाँ हिउँडर जेस्जाव छ, जहाँ थोरह अध्ययन सैन्य सेवासँग जोडिएको छ। यो त सामान्यतया तीन वर्षको सट्टा मात्र सोह्र महिना लाग्छ। कब्जा गरिएका इलाकाहरूमा, सैनिक सैनिकहरू प्रायः कट्टरपन्थी हुन्छन् र अन्तस्करणको विषयहरूमा मात्र तिनीहरूका रबबिसका आदेशहरू स्वीकार्छन्। धेरै पटक तिनीहरूले विनाश मा सेना आदेश बाट आदेशहरू निष्पादित गर्न इन्कार गरेका छन् अवैध आवास.
हेडर येसिव जोडिएको छ रूढ़िवादी आभूषण यसको प्रवाह धार्मिक शताब्दी त्यो यसको ओर्थोलोक यहूदी प्रवाहको विपरीत साझा यहूदी धर्म सकारात्मक तिर सियोनवाद र यसको विस्तारमा सहभागी हुन इजरायल सेना राज्य.'
पछि मैले थाहा पाए कि उनले तपाईंको वेबसाइट मा AIVD को लागि काम गरे। त्यो मेरो बारेमा केहि पनि छैन। यद्यपि, तपाईं जस्तै कि एक पहिचान कागजात प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछैन। यो इजरायलका सेनामा सेवाको "राम्रो" रेकर्ड र एक सभ्य शिक्षाको साथ सम्भव हुन सक्छ - किनभने उनी भन्छिन् कि उनीसँग यो छ; और जब म उनको इंटीरियर को बारे मा सोचते हो, म धेरै राम्रो साहित्य पनि देख्छु - म AIVD मा जा सकता हूँ? वा उनीहरूलाई समलैंगिक जीवनमा एक 'wheelbarrow' भेट्न मद्दत गर्यो, जसमा उनले "प्रमुख व्यक्ति" जस्तै अस्कर हम्मर्सटेइन र पिम किल्लायनसँग सम्बन्धित कुरा गरे? उनले फोर्टुएननसँग बिहेलाई पनि साझेदारी गरे।
उनको अघिल्लो इतिहासबाट मलाई थाहा छ कि तिनको बुबा प्रायः दुर्व्यवहार र 'कठिनाइ' मानिन्छ। उनी इंग्ल्याण्डको एक बोर्डिङ स्कूलमा एक बुबा द्वारा राखिएको थियो। के त्यो कारण सबै जिन्दगी, सचेतक, असामान्य र हेरफेर बनिएको छ? युवाहरूमा अपमान हुन सक्छ, मैले सोचेँ, कहिलेकाहीँ कसैलाई सधैं उनीहरूको भित्ता प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। वैसे पनि म एक मनोवैज्ञानिक छैन।
किनकी मलाई संधै सावधान रहनु पर्छ कि म सचेत देखि गलत जानकारी संग खिलाया नहीं हूँ, म यस सबै प्रकाशित गर्न को लागी लंबा संगत छ। यस बीचमा मलाई पत्रकारिता रुचि निकै ठूलो छ। यदि यो गलत जानकारी हो भने, यसले सबै मानिसहरूलाई कसरी काम गर्दछ भन्ने देखाउँछ। यसैले म अग्लो छ। पहिलो उत्तर र त्यसपछि जवाफ।
धेरै उपयोगी जानकारी।
तपाईं प्रशिक्षण र व्यापार गतिविधिहरू, आपराधिक रेकर्ड र मनपर्ने बारे थप जान्नुहुन्छ?
नाओमी स्वापाचु वेबसाइटमा धेरै सक्रिय छ।
त्यहाँ कुनै पनि सक्रिय छ जो psuedonym Ziva को तहत लेखछन। मलाई यो महिलाको बारेमा थाहा छ कि त्यो इजरायल सेनामा पनि सेवा गर्दछ। त्यसैले लाइनहरू स्पष्ट हुँदैछन्।
र यहाँ निम्न प्रतिक्रिया:
उनको शिक्षाको बारेमा, उनले भन्यो कि उनको मनोविज्ञान मा स्नातक डिग्री र डच साहित्य मा मास्टर डिग्री र व्यवसाय प्रशासन मा एक डिग्री थियो। त्यो मलाई धेरै देखिन्छ। यद्यपि उनको धेरै बहादुर छ। म सोच्छु उसको बल उनको आफैं यति विश्वस्त हुनुहुन्छ। मलाई आश्चर्य छ भने त्यो सही छ। उनले अरू कसैलाई देखेको जस्तो जस्तो गलत हुन सक्छ र उसले धेरै पटक दोहोरिन्छ। साथै, दायरा धेरै एक-पक्षीय र अध्ययन गरिएको छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यो वर्षहरु को लागि मान्छे को एक नै ज्ञान को दिखा रहेको छ।
मलाई थाहा छ कि हाल सम्म उनी RABO बैंक को यूट्रेट मा एक प्रकार को विभाग को प्रमुख थिए र त्यो अब केवल दर्जन वेबसाइटहरु लाई प्रबंधित गर्दछ (जसको केहि पनि आय प्रदान गर्दछ)। मैले त्यो खोजी गरेको छु र मलाई संदेह छ कि तिनीहरु मध्ये धेरै पटक अश्लील साइटहरू छन्। अन्य साइटहरूमा जसमा उनी सक्रिय थिए, जस्तै स्वपिचाउ, उनले सधै यसलाई यो सच्याउन वा काम गर्न, यसलाई बेमेल गर्न र त्यस्ता कुराहरू जस्ता काम गर्न थाले।
के उनी एक राजनैतिक एजेन्सी बन्न चाहन्थे जसले "सीधा" गरिन सक्छ वा जुनसुकै कुरामाथि आक्रमण गर्नु पर्दछ जुन इजरायलको आलोचना जस्तो देखिन्छ? इजरायललाई आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित वा धम्की दिने व्यक्ति। मैले पनि सोचे कि तिनी कसरी निरन्तर "यहूदी" बनाउँछन् यहूदीको रूपमा। मेरो बलियो भावना थियो कि उनले मानिसहरूको छनौट समूहको भाग महसुस गरे। मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा कुनै छनौट गरिएका राष्ट्रहरू छैनन्, त्यसैले म सानो कष्टप्रद थियो।
मलाई त्यो छिमेकीबाट आपराधिक रेकर्ड थाहा छ, तर यसमा त्यो आधारमा, मलाई थाहा छैन। आफैमा, त्यो छिमेकी एक सनसनी खोज्ने होइन। म पड़ोसीलाई थाहा छ कि नाओमीले उनको सामना गर्ने प्रदर्शनको साथमा क्रिस्कृत गरेका छन्। उदाहरणको लागि, उनले सार्वजनिक रूपमा एक मेरा छिमेकीलाई भनिन् (एक तथाकथित गुलाबी कैफेमा) "कम-बुद्धिमान बन्दर" जस्तो कि यो त्यस्ता चीजहरू भन्न चाहन्थे। शायद त्यो सही थियो, तर त्यसपछि तपाईं केहि जस्तो भन्न नपाउनुहुन्छ? यो पनि आफुले अरुलाई भन्दा माथि राख्न चाहने विचार हो। मलाई अर्को छिमेकीबाट थाहा छ कि नाओमीले 'स्टकिंग' को लागि पुलिसलाई रिपोर्ट गरेको छ।
त्यहाँ मानिस र तथ्यको बीचमा होसियार र नियमहरू छन् कि उनी सोच्छन् कि नियमहरू उनको लागी लागू गर्दैनन् र अर्को मनोवैज्ञानिक मनोभाव हो। र यदि तपाईं उसलाई व्यक्तिगत रूपमा जान्नुहुन्छ, उनी प्रायः मजाक बनाउँछिन् जसमा उनीहरु 'चीज' को लागी सोच्न लाग्दछन् जस्तो लाग्छ, 'हां, म एक लाइनमा खडा हुने छैन, यो मूर्ख मानिसहरूको लागि हो। मलाई वास्तवमा मद्दत गर्नै पर्छ '। ती केवल मजाकहरू हुन्, तर यदि तपाईंले सुन्नुभयो भने यति भन्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई सोच्दछ। र त्यसमा।
ओ हो हो, हार्दिक आक्रमण। चाहे त्यो नकली हो। मलाई यति धेरै सोच्दैन, किनकि उनी भन्छिन् कि उनी समस्याको लागि चार प्रकारको औषधि प्रयोग गर्छन्। हृदयघातको कारण औषधि प्रयोगसँग सम्बन्धित भनिएको छ। उनले त्यो हृदयको पछाडि उनीसँग यौन सम्बन्धको पछाडि आक्रमण गर्थे र एकै समयमा उनको छोराले उसलाई भनिन् र उसलाई तर्क दिए। जब त्यो अस्पतालमा थियो, त्यहाँ केहि चीज थियो जुन गहन हेरचाह बचाउन सक्थ्यो। त्यसपछि तिनले राति ट्र्याक ट्र्याक चलाए र आत्महत्या विचारहरू पाउथे। यही कारणले गर्दा उनी उनको आमालाई रातको मध्यमा बुलाए, उनले यसो भनिन्: "अब यो रात हो, र म बिस्तारमा छु।" के तपाईं यस्तो परिवार कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
तर अन्त्यमा हाम्रो नाओमी डप गरिएको थियो र अहिले यो हृदय फेरि फेरि जान्छ।
मार्टिन, म आजको लागि रोक्न चाहन्छु। यदि केहि पनि मन पर्दैन भने, म तपाईंलाई ईमेल गर्नेछु।
जेरोन हग्वेवीजले कोकाको छेउमा मिका काटेर बाँच्न प्रयोग गरे। ती शुरुआती दिनहरूमा, जब मैले नीदरल्याण्डमा वैकल्पिक मीडिया कसरी नियन्त्रण गरेन भनेर थाहा पाएन, र मैले शुद्ध (केहि हदसम्म) न्युयोर्क उत्साहबाट आफ्नै लेख लेख्न थाले, यो जेरोन हुग्वेइजिजको कडा आक्रमणहरू ज्ञात स्थानहरु को वेबसाइटहरु मा कल गर्न को लागी अपरिहार्य थिए जहाँ म जान्छु र मेरो निजी घर बाट सबै प्रकारका व्यक्तिहरु लाई जानकारी निकाल्न को लागी संकोच गर्न मिल्दैन। मीका काट्नुपरेको छैन कि म यो क्यामेराको साथमा आफ्ना छिमेकीमा जानुभएको बेला यो राम्रो योजना थियो। म अब किन राम्रो बुझ्छु। नियन्त्रणमा रहेका विपक्षी खेलका पाना शाब्दिक रूपमा कुनामा वरिपरिका साथ बिताए। यद्यपि मीका काटो जेरोनले पनि आक्रमण गरेको थियो, यो कहिल्यै कुनै आधारभूत थिएन र मुख्य उद्देश्य मेरो व्यक्तिमा वास्तविक सशस्त्र आक्रमणहरू मास्क गर्न थाल्छ र छाप दिने पनि थियो कि दुई छिमेकीहरू एउटै गढ़बाट थिएनन्।
देखि 2014 बाट मेरो आविष्कारहरू हामी पनि जान्दछन् कि मीका काटी (पूर्व सल्लाब्लावर अनलाइन र अहिले क्रान्तिकारी अनलाइन) को लगानीकर्ताहरूको सञ्जालसँग जोडिएको हुन सक्छ जुन स्वच्छ प्रतिष्ठा छैन। हामीले लिङ्क अक्रोमोफ र रोबर्ट रुबेनस्टीनसँग लिङ्क देख्यौं। मिका काटले फेरि छान्ने विचार टैंकलाई राष्ट्रिय नीति (सीएनपी) भनिन्छ। त्यसोभए यो वास्तवमा सबैसँग सम्बन्धित छ। नेदरल्यान्डको ठूलो वैकल्पिक मिडिया वेबसाइटहरूले मका कटाबाट मेरो अनुहारबाट आफूलाई केही फरक पारेका छन्, तर उनीहरूले धेरै खुल्ला रूपमा खुल्ला समर्थनको खुल्ला समर्थनबाट आफूलाई कहिल्यै नराम्रो पारेका छन्, जसले किट एक फाउन्डियर पुरस्कार पनि पार्यो। फ्रंटियर ठूलो नाम थियो जुन वर्षको संगठित कांग्रेसका लागि हजारौं पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरियो; जो अझै एम्स्टर्डम मा जोर्डन मा एक किताबखाना चलािन्छ र धेरै वर्ष को लागि एक प्रमुख पत्रिका प्रकाशित गरेको छ। वैकल्पिक मिडिया देशमा एक प्रकारको पिभोट।
धेरैका लागि, छविले मलाई स्केच गरेको छ कि वैकल्पिक मिडिया मात्र नियन्त्रण नियन्त्रित क्षेत्र चाहँदैन, किनभने यो जीवनको खण्ड हो। यदि तपाईं वर्षहरु केहि निश्चित स्रोतहरु बाट केहि जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ र अचानक कसैले तपाईंलाई बताउँछ कि यी नियन्त्रित स्रोतहरू छन्, त्यसपछि तपाईंले कसैको विश्वसनीय स्तम्भहरू हल्लाउनु हुन्छ र त्यसपछि 'संज्ञानात्मक विचलन' भनिन्छ मनोवैज्ञानिक घटनामा असर पर्दछ।
स्रोत: क्याफे Weltschmerz (YouTube)
2018 जेरोन / नाओमी मा एक दंगा को बारे मा फेरि खबर आयो जहां त्यो / धन को कमी को कारण उनको घोषित हुनेछ। मैले माथिको उल्लिखित मेल एक्सचेंजबाट व्यक्तिबाट इ-मेल प्राप्त गरेको छु। लेखकको अनुसार नाओमी अस्कर हम्मर्सटेन (कैफे वेल्स्चेम्बरजको एक स्वागत अतिथि) द्वारा संरक्षित गरिनेछ किनभने उनको साथ उनको यौन सम्बन्ध भएको थियो। स्रोत मान्न उचित छ, यो सफा हुन सक्ने नामहरू एक नेटवर्क हो भनेर स्पष्ट हुन्छ।
तपाईंको जानकारीको लागि यो अखबार रिपोर्ट:
के तपाइँ पहिले नै थाहा छ? यो दिउँसो म उनको घर खाली हुनेछ। केवल google र हो प्रयोग गर्नुहोस् ... यदि त्यहाँ उनीसँग केही गल्ती छ भने यो सधैं धेरै थोरै हुन्छ।
तपाइँ सम्भवतः हर्मस्टीन जान्नुहुन्छ। गरीब श्रीमती हुग्भ्वेइजले मलाई बताए कि यो वकील उनको बिहेमा एकजना थिए। त्यसकारण उसले उनको लागि काम गर्न चाहन्छ।
मलाई धेरै माफी छैन ...
म यो सबै जानकारी संग के तपाईं देखाउन चाहन्छु कि मुख्य स्ट्रीम मिडिया र वैकल्पिक मिडिया दुवै जाँच गरिएको छ। जो पनि यो नियन्त्रित खेलसँग सम्बन्धित छैन जो क्रूर रूपमा हानिकारक हुन र हटाउनुपर्दछ। त्यो जेरोन हग्वेवीज (अब नाओमी) को काम थियो। केही अनुयायीहरूको वफादार सहयोगको लागि धन्यबाद, म रोकिन सकिन र म अझै पनि बाँच्न सक्दिन। त्यो समर्थनले मलाई जीवित बनायो। यसको बावजूद बल क्षेत्र को माध्यम ले देखने को लागि उपयोगी छ र यसैले पत्ता लगाउन को लागी कि वैकल्पिक मीडिया वेबसाइटहरु को सामान्यतया एक डबल तल मा बनाइयो या जानबूझकर जानकारिहरु संग जानकारी मा निर्मित परिष्कृत छ (जस्तै मेरो तल दस्तावेज मा व्याख्या अघिल्लो लेख)। यो वास्तव मा एक घातक थकावट खोज छ, किनकी यसको अर्थ छ कि तपाईं अब एक कप कफी संग एक साथ बस्न वा एक बियर जानकारी खपत गर्न र सत्य को लागि यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन।
दुर्भाग्यवश यस समूह को लागि एक मुश्किल हास्य उनको खेल मैदान मा फर मा घबराया छ, जो यिनी सबै चीजहरुलाई प्रकट गर्दछ। म यो गर्दैन किनभने म यो धेरै मनपर्छ, तर म गर्छु किनभने मेरो वास्तवमा एक विकल्प छैन। मेरो नाम माच को माध्यम ले खींचिएको छ ताकि त्यहाँ केवल दुई विकल्प बाकी छ: मेरो व्यक्ति मा सबै हमलाहरु पछि या तल मा रहन को लागी माथि रहें र झूठहरुलाई बेवास्ता गरें। मैले पछिको लागि चुनेको छु।
मार्टिन भेरिजल्याण्ड जेरोन हुग्भ्वेइजको स्प्रेडर र विरूपण अहिले नै नाओमी हगोगोइज नामक छ।
मार्टिन भिजल्याण्डले महत्त्वपूर्ण अपडेट रोक्छ
ट्याग: वकील, क्याफे वेल्स्चेमर्ट्ज, CNP, राष्ट्रिय नीतिको लागि परिषद्, हैमरसिन, Hoogeweij, ज्याक एब्रमोफ, याल्टा, जेरोन, कैट, Micha, नाओमी, विरोध, ओस्कार, रोबर्ट रुबेनेस्टीन, स्वापाचु
5 मई 2019 मा 12: 07
5 मई 2019 मा 12: 37
उनीहरुका अनुसार उनीहरु आफुलाई अलिकति माया गर्दछन्
5 मई 2019 मा 13: 05
ओस्कर हम्मेस्टीनले यसलाई फफुएननका लागि क्याफे वेस्चेर्टर्ट भिडियोमा रेकर्ड गर्न सक्छ र आक्रमणमा टाउको झिक्न सक्छ, तर यो फ्युयुएनएन र अब एफभीडीको नियन्त्रण बल क्षेत्रमा यो सम्पूर्ण कथा राख्न उपयोगी छ। यस्तो राजनीतिक आलोचनाहरू विरोधी र सुरक्षा जालहरूको रूपमा स्थापित गरिएका छन् र ज्ञात (होशियार र नियन्त्रणमा) राजनैतिककरण यसका भाग हुन्।
यसबाहेक, हम्सस्टीनले मानिस / महिलालाई बचाएको छ जसले मान्छेलाई निकै गाह्रो बनाउँछ। हर्मस्टीनले कसरी वर्णन गर्नेछ?
5 मई 2019 मा 13: 07
म कल्पना गर्न सक्छु कि तपाइँ जस्तै केहि गरौं कि पुरानो प्रेमको लागि ओस्कर (यदि यो सत्य हो भने) ..
र शायद यो यहूदी मूल को मान्छे को बीच एकता संग गर्न पर्छ; म यहाँबाट अनुमान गर्न सक्दिन। म केवल गोयिम पनि हुँ।
5 मई 2019 मा 13: 09
5 मई 2019 मा 13: 20
@Martin तपाईं 1992 को Bijlmer आपदा को बारे मा एक साइट मा एक टिप्पणी को बाद मा, आईसीटीएस (Schiphol) तपाईं एक निश्चित डेविड जन des Doods देखि इमेल को धमकी गर्न शुरू गर्यो? त्यसो भए उनीहरु आफुले आफुलाई एक अर्काको साथ दिएका छन। उनीहरुका अनुसार उनीहरु आफुले आफुलाई आफुले आफुलाई आफुलाई माया गर्दछन्।
मैले सोही घटनाको लागि एक राम्रो अतिरिक्त सोचेँ
5 मई 2019 मा 13: 38
क्याफे Weltschermtz भिडियोहरू मौलिक रूपमा SALTO सँग सहयोगमा बनाइएका छन्।
SALTO शिक्षा र प्रशिक्षण टीसीए संसाधन केन्द्र 2018 मा यूरोपीय आयोग द्वारा स्थापित भएको थियो जसलाई Erasmus + National Agencies को समर्थन गर्न को लागी उनको अन्तरराष्ट्रीय सहयोग गतिविधिहरु (टीसीए) को सुधार को लागि।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गतिविधिहरू (TCAs) Erasmus + National Agencies (NAs) को लागि प्रणाली प्रणाली हुन् जुन प्रणालीगत स्तरमा Erasmus + कार्यक्रमको प्रभाव बढाउन साझेदारी।
त्यसोभए विपक्षी च्यानल कैफे वेल्स्चेमर्ट्जले ईयू बाट नियन्त्रण गरेको छ वा कम से कम यसको साथ सहयोग गर्दछ (साल्टो); यो सरल छ। यसलाई नियन्त्रणमा नियन्त्रण भनिन्छ।
5 मई 2019 मा 13: 44
..हामी र त्यो जहाँ हामी यस पाइपमा पनि स्टीव ब्राउन विरुद्ध आइपुग्छौं
5 मई 2019 मा 13: 45
Erasmus + विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको लागि अवसर प्रदान गर्दछ, जस्तै विश्वविद्यालयहरू, अन्य शिक्षा र प्रशिक्षण प्रदायकहरू, विचार टैंकहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू र कम्पनीहरू।
युरोपेली संघको एरमास + कार्यक्रम शिक्षा, प्रशिक्षण, युवा र खेलको क्षेत्रमा समर्थन गतिविधिहरूको लागि एक अर्ब योजना हो।
कार्यक्रम तीन तल्ला भनिन्छ "कुञ्जी एक्शन" र दुई अतिरिक्त कार्यहरू। तिनीहरू राष्ट्रीय स्तरमा राष्ट्रीय स्तरमा आंशिक रूपमा व्यवस्थित छन् र आंशिक रूपमा युरोपेली स्तर EACEA द्वारा। यूरोपीय आयोग Erasmus + नीतिहरूको लागि उत्तरदायी छ र समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्दछ।
5 मई 2019 मा 13: 52
"हो, तर डे वेलिजर, तपाईं आफ्नो पैसा संग, तपाईं किन पैसा फेंकनुहुन्न" (परिचय हेर्नुहोस्)
खैर किनकि हामी यो कुरा गर्न चाहन्छौं कि हामी स्वयंसेविकाहरू हौं जसले ईमानदारी हाहा जस्तै केहि छ।
त्यहाँ एरिक पछि मात्र एक युनिटी पोटी छ: कि अख्तियार फ्लाकर लागू हुँदैन
5 मई 2019 मा 15: 18
@zalm, तपाईंको अर्थ के हो भनेर बुझ्नुहोस्। यो सबै सुन्दर मोटो छ, जो यो पाठ्यक्रम हेर्न सक्छ को लागि
5 मई 2019 मा 13: 56
विलियम मिडेलकोपले आफ्नो ढाँचाको छललाई आफैलाई धोका दिने एउटा भाग हो, किनभने इस्राएलको योनिनवादको यो विश्वव्यापी चित्रमा महत्त्वपूर्ण साधनको रुपमा उल्लेख हुँदैन। सालको '90' को शुरुवातदेखि म्यापिंग (मेरो लागि) विश्वव्यापी शक्ति आधार, विशेष गरी अक्टोबरमा 'एनएनएनमक्समा बिज्मर क्यान्सर' पछि र मैले लगातार त्यस्ता अभिनेताहरूलाई ढाँचामा छलफल गर्छु।
5 मई 2019 मा 13: 59
यो वास्तविक धोखा सुनिरहेको छ र शंकर हो
5 मई 2019 मा 14: 10
खैर, यो फेरि स्पष्ट छ कि तिनीहरू एकछिन र एकअर्कालाई थाहा छ।
यो कहा जाता छ कि मदोदाम मुक्त छ। त्यसोभए मैले कसलाई मुक्त गरें? हामी अझै मेरो विचारमा व्यस्त छौं। र तिनीहरू आफ्नो प्रमुख पदहरूमा दृढतापूर्वक र सजिलो छन् जब तिनीहरू वास्तवमा प्रस्थान गर्नेछन्? उनीहरूले के भन्थे।
5 मई 2019 मा 17: 35
यदि हामी अहिले निराशावादी छैनौं, यो अझ ठीक छ के हो यो मोटाइ दिन्छ। कडा पछाडीको धुलो धुलो गर्न बियर र बटुवा
5 मई 2019 मा 16: 28
अनि Niburu.co जसले कहिलेकाहीं मिच कटको समर्थन गर्दैन, तर पछिल्लो वर्षमा आफ्नो हातले लेखहरू पोस्ट गरे, अब अबउन्ट-ज्यान पोर्टरमैन कथाको साथ आउन सक्दैन। इवर्ट-जेनले मलाई हिस्ट्रो च्यानल वृत्तचित्रको उल्लेख गर्दै आएको छ, तर अझै पनि पत्ता लागेन कि त्यो वृत्तचित्र वास्तव मा इतिहास च्यानल को उपयोग गर्दछ र उनको ज्योतिष सिचिन र एरिच वान डिननिक जस्तै मान्छे को बारे मा उनको दस्तावेज को उपयोग गर्न को लागी को बारे मा बताइन्छ कि उनि किन घोषित गर्छन।
त्यसो भए, मैले चिन्तित छु, Niburu.co ले बहुसंख्यक नियन्त्रित खेलको विरोध र बेस्सरी संग सत्यको मिश्रणको भाग हो।
5 मई 2019 मा 16: 30
र अलेक्जेंडरra हेटेबिजज एज-ज्यान पोर्टरमैनको सामग्री जाँच गर्न सजिलो छ र यसैले अब सम्म पत्ता लगाइएको छैन कि दस्तावेज इतिहास च्यानल बाट होइन, तर इतिहास इतिहासबाट मात्र उद्धरण गर्दछ। सम्भवतः ईफ्ट-जेनले वृत्तचित्रमा केहि मिनेटका लागि यहाँ र त्यहाँ हेरे। त्यो कागजात धेरै शक्तिशाली छ र विस्तृत विवरण (झूटो भनिन्छ) वर्णनमा वर्णन गर्दछ।
5 मई 2019 मा 16: 35
उनीहरूले यस साइटबाट प्राप्त जानकारीलाई हड़ताल गर्दै र त्यसपछि उनीहरूको साइटमा प्रतिक्रियाको रूपमा पोष्ट गर्नुहोस्। राम्रो ज्ञात मनोविज्ञान / विविधता रणनीति, ताकि भेडाहरू फेरि टाढा जान्छ र हिसाबले, विशेष गरी ओजाना खरिद गर्न सक्दछन्।
7 मई 2019 मा 05: 45
खैर, त्यसोभए तपाईंले फेरि देख्नुहुन्छ, दयालु दयालु दयालु। लुसा वान बर्न जसले मार्जीजनलाई पक्कै पनि यी सबै पागल र मदिरा झूट बोकेका हुन्छन्, एकदमै हिंसक शरिर हुन्छ, जसले नियमित रूपले घुम्न पाउँदछ जब तिनीसँग सिप हुन्छ। मैले केही समयको लागि उनको सहयोगको प्रयास गरेँ, तर उनीहरूलाई मात्र सहयोग चाहिन्छ कि बन्द संस्थाको र तिनको गधामा हल्लडोल इंजेक्शन। केही बिंदुमा मैले आफैंबाट छुट्याएँ र त्यो त्यो पाचन गर्न सक्दैन। त्यो मार्टिज (जस्तै म हेरचाह) लाई मानसिक बीमार पत्र पठाउनेछु। मानवअधिकार मा उनले आफु को लागि विचित्र व्यवहार को कारण बर्बाद गरे, मलाई यसको साथ केहि गर्न छैन
र उह .. लुका transsexual? होइन, यार। मार्जीजिन अवश्य पनि आफैलाई पनि बुद्धिमानी छैन, अन्यथा एक अलार्म घंटी उनको लागी घाम लाग्ने थियो जब उनले उनलाई भने कि उनी उनको ट्राजेगेंडर प्रकृयाको लागि "डीएनए परीक्षण" गरिरहेको थियो। वास्तविक बुल्लट, किनभने कुनै डीएनए अनुसन्धान सबै ट्रान्सगेंडर प्रक्रियामा सम्पन्न गरिएन। कठोर सत्य हो कि उनले उनको विवाह को लागि VUmc मा संक्रमण नहीं मिलयो, किनकी उनि पनि त्यो मानसिक रूप देखि परेशान थियो कि यस प्रक्रिया संग सामना गर्न मा सक्षम हुन को लागि। उनीहरु वरिपरि घुमाए र आक्रामक भए र अन्त उनको संक्रमण संग थियो। त्यसोभए उसले डीएनए परीक्षणको साथ केही बेकार बेचेको छ। जबकि लुका एक transsexual छैन, तर एक transvestite। एक जना मानिस जो ड्रेस पहन्छ तर उनको ट्राफिकको बारेमा चिकित्सा पनि गर्दैन।
त्यसोभए उनीहरूले आफ्नो अपार्टमेंटमा केही व्यक्तिलाई आक्रमण गरे जुन उनीहरूको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ, म्यानमार बेक-बिज्जलले पनि उनको लुका वान बर्न द्वारा एक टूटेको बोतलको साथ उनको व्यवहारमा पनि उपचार गरेको थियो। । यो मिरांडा बेक-बिजल (फेसबुकमा पुग्ने मात्र) को प्रमुख हो जुन लुकाले उनको टाउको बिच्छेएको बोतलको साथ व्यवहार गरे पछि जस्तो देखिन्छ: https://imgshare.io/images/2019/05/06/29570730_2032593783654534_2819921000651502340_n-1.jpg
उनले पहिले नै ढोकामा लात लगाउने प्रयास गरेको थियो, यो घृणाले भरिएको छ र आफ्नै आफ्नै क्रियाकलापको सामना गर्न असक्षम छ।
मर्टिमेन्ट व्रिजल्याण्डको बिस्तारै बिस्तारै, जुन मेरो लागि "पीडित" को रूप मा रोएको छ। उनीहरूले आफ्नो बेटीलाई मलाई बिना कुनै पनि हेर्न सकेनन भने, उनीहरु बिना मजाक गर्ने सबै दुर्व्यवहार संग मेरो कामबाट बाहिर निस्केको थियो र यो एक तथ्य हो कि उनले गम्भीर सम्बन्धमा महिलाहरुको एक श्रृंखलालाई गम्भीरतापूर्वक गम्भीर पारेको छ। बस लुका जस्तो, उसले आफ्नै कार्यहरूको जिम्मेवारी लिन असमर्थ छ र आफूलाई बाहिर सबै केहि खोज्छ। धेरै दयालु
त्यसैले, अह, दुर्भाग्यपूर्ण Martijn, तपाईं फेरि एक ठूलो गल्ती गर्नुभयो, लुका वान बर्न एक गंभीर मनोरोग रोग र एक शरारत हो, उनको कथा मा गम्भीर (जस्तै मनोरञ्जन) बेग्लै हुन्छ। एक मजाकको रूपमा, त्यहाँ त्यहाँ सिर्जना गरेको ग्यासको बारेमा शिक्षा संग्रहालयलाई सोध्नुहोस्, त्यो पागल भए अघि तिनको नियोक्ता थियो।
7 मई 2019 मा 10: 21
यो दिलचस्प हुनेछ यदि यो अदालत अघि ल्याइयो। त्यसपछि म प्रश्न सोध्न सक्दिन किन यो यो मामला संभाला गरिएको छ र तपाईंको ठेगानाको लिबिल र विरूपण विरुद्ध मेरो रिपोर्ट होइन।
तपाई अब लुकाको पूरा नाम नाम सुरू गर्न सक्नुहुन्छ, जुन वास्तवमा एक सकारात्मक कुरा होइन।
यो स्पष्ट छ कि तपाईंले सुरुमा यो व्यक्तिलाई व्यक्तिगत मित्रको रूपमा मान्नुभयो र अब (अब त्यो तपाईले सूट गर्दछ) तपाईंलाई पागल पागल मानिन्छ। त्यो मामला राम्रो हुन सक्छ। मैले पनि स्पष्ट रूपमा भनें कि म कथामा भरोसा गर्न सक्दिन भने मलाई थाहा छैन, तर यो मैले प्राप्त गरेको उल्लेखनीय थियो।
अब हामी तपाईंको सबूतबाट जान्दछौं कि तपाईं चीजहरू अरूसँग जस्तै राख्न सक्षम हुनुहुन्छ। म Anass मामला मा मृत ध्रुव को नकली पुलिस रिपोर्ट को सम्झना। तपाईं स्पष्ट रूपमा एक नकली पुलिस रिपोर्ट सँगसँगै राख्न सक्नुहुन्छ र यसको साथ लिनुहोस्। सायद तपाईंको जडानको बारेमा केहि भन्नुहुन्छ?
यो मलाई आश्चर्यचकित छैन यदि तपाईंले यो लुका प्रयोग गर्न जाल सेट गर्नुभयो भने। त्यो तपाईंको क्लबसँग कसरी काम गर्दछ।
मैले तपाइँको प्रकाशन शुरु गर्नु अघि मैले मेरो छोरीलाई देखे। त्यहाँ केवल यसको लागि एक कानुनी सत्तारूढ थियो। तपाईं दौडिनु र झूट बोल्नुहुन्छ।
तपाईंको व्यवहारले तपाईंको लिङ्ग परिवर्तनको कारण सानो छ। म भन्नेछु: तिम्रो हृदय मानिसको विचार गर्नुहोस्!
7 मई 2019 मा 11: 30
वर्षौं पहिले, मैले बिन्दु द्वारा प्रमाणित बिन्दु रहेको छ र स्वैपचाउमा धेरै विस्तृत कारणहरू छन् किनकि तपाईंको घोषणा स्वीकार्य छैन। तपाईंले यो बेवास्ता गर्नुभयो, किनकि यसले तपाईंको सडकमा झूटो पीडित हुन को लागी अझ राम्रो फिट बस्दछ। तपाईं मेरो विरुद्धमा कुनै मामला छैन। वैसे, म माथिको टुक्रा सहित, तपाईंको विरुद्धमा हुँ। तर यदि तपाईं मेरो गलत घोषणामा मेरा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी जान्न चाहानुहुन्छ कि कसैलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ किनकि तपाईंसँग खडा गर्नको लागि कानुनी पेटी छैन, यो पढ्नुहोस्: https://swapichou.wordpress.com/2014/04/05/de-valse-aangifte-van-martin-vrijland/
लुका साँच्चै मेरो व्यक्तिगत मित्र होइन। म उनको खराब पीडा, घृणा र आक्रामकता द्वारा उनको सतहमा आक्रोश भएको थियो र म आफ्नो व्यक्तिगत वातावरणमा यस्ता व्यक्तिहरू चाहान्न चाहान्छु र मैले उसलाई तीव्र गतिमा लिएको छु। म जो मान्छे बिना, कुनै कारण संग मेल नहीं खाता, उनको अनुहार मा गिलास को एक टुकडा संग काम, मान्छे मा ढोका, इंटरनेट मा नफरत अभियान चलाए, या तपाईं घृणा र झूठ संग उनलाई खाना को लागि आंकडाहरु संग संपर्क मा प्राप्त। लुका आफै र अरूलाई खतरामा छ र म कुनै पनि माध्यमले मात्र पाएको मात्र होइन।
पुलिस प्रहरीको बारेमा के तपाईलाई मनपर्छ? तपाईं मेरो लागि झूटो रूपमा दोषी छ र मैले सोचे कि यो एक राम्रो मजाक थियो जुन तपाईं संग बाहिरिएको थियो। तर मसँग मसँग केहि गर्न को लागी मसँग मसँग केहि थिएन। म तपाईंसंग चिन्ताजनक थिए, अनास को दु: खी आमा को तपाईंको पुरा तरिकाले बेपत्ता शोषण को बारे मा। यसले तपाईंलाई गहिरो र कम व्यक्ति बनायो। त्यसोभए कि ती बेग्लै प्रहरी प्रहरीले प्रतिवेदनमा मुख्यतया थाहा पाएको छ कि तपाईले तपाईको सडकमा फिट बस्नु भएको जानकारीको असहमत प्रतिलिपिमा बेवकूफ कसरी हुनुहुन्छ, वास्तवमा तपाई जस्तै अब तपाईं लुकाबाट मेरो चौंकाने झूट बोल्नु हुन्छ। कुनै विद्रोह, कुनै अनुसन्धान छैन, तपाईं केवल धेरै बेवकूफ, विचलित र बुद्ध केहि पनि पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुन्छ।
के मैले ल्प सेट गर्न लुका प्रयोग गर्दछु? साँच्चै धेरै मजाकिया। धेरै मार्टिज्जको सम्मान, तपाईं मेरो जस्तै यो टुक्राहरु संग माँग मागिरहनु भएको छ, तर तपाईं एक पुरा तरिकाले अनपेक्षित हारेको हुनुहुन्छ जसको लागी मैले कुनै "दया" गर्न को लागी ऊर्जा छैन। यी दिन म पूर्णतया विभिन्न चीजहरूमा काम गर्दैछु। तपाईं जस्तै चित्रले मलाई आत्मिक मनोरञ्जनमा काम गर्न प्रेरित गरेको छ र अब मलाई वृद्ध र फोरेंसिक मनोरोग संग व्यस्त रहन्छ। मलाई लाग्छ जस्तो तपाईं कसैलाई रोगी वा धैर्य रूपमा मात्र रोचक छ। म घरमा न्यायमा जाने सामाजिक क्षतिको बारेमा चिन्ता छैन।
रेकर्डको लागि: म कहिल्यै साँच्चै तपाईंको बच्चाको आमासँग सम्पर्क गरेको छैन, त्यहाँ तपाईं अधिक काम गरिरहेका मानिसहरू थिए। त्यसोभए तपाईले तपाईबाट केहि निष्पक्षहरू हेर्नु पर्छ। म साँच्चै तपाईंको बच्चाको साथ तपाईंको सम्पर्कको परवाह छैन। तर तपाईंले गल्ती गर्नुभयो: तपाई मेरो छोराको फोटोलाई तपाईंको ब्लगमा राख्न र टिप्पणीमा मेरो छोरालाई टिप्पणीमा धम्की दिइयो। त्यसपछि निस्सन्देह तपाईले यसको बारेमा बोलाउनुहुन्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा म धेरै लाग्न सक्छु, तर तपाईं मेरो छोरामा आउनुभयो भने तपाईसँग समस्या छ। तपाईंले त्यो राम्रो अनुभव गर्नुभयो, तपाईंले त्यो बिल भुक्तानी गर्नुभयो।
7 मई 2019 मा 11: 56
स्वपिचूमा तपाईंको टुक्रा तथ्यहरु जेरोन को सबै सम्बन्ध मा विकृत छन्।
म विस्तार देखि काम गर्न को लागि फेरि समस्या को लागी नहीं जाँदैछु। त्यसोभए एक सम्भावित कानूनी मामला मा छलफल गरिनेछ।
वास्तविक घोषणा मैले बनाएको छ धेरै विस्तारमा, तर तपाईं केवल आफ्नो सडकमा फिट बस्नुहुन्छ र म तपाईंलाई प्रयोग गर्न प्रयोग गरिरहेको धेरै चीजहरू मोडिदिन्छु।
कि तपाईंले पूर्व अरीनासँग सम्पर्क गर्नुभएन, मेरो विरुद्धमा एक स्वर हटाउनको लागि, अन्य प्रजाहरू नजिक पुगेर उनीहरूले मेरो विरुद्धमा गलत कथनहरू (म तिनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरे) लाई समेट्न खोजेको छु, म टेपमा छ।
मलाई थाहा छैन कि तपाईंले यो भिडियो देख्नुभयो? अन्यथा म यसलाई यहाँ राख्न चाहन्छु।
तपाईं भन्नुहुन्छ "मलाई तपाईंको बच्चाको साथ तपाईंको सम्पर्कको बारे मा परवाह छैन," तपाईंको आत्म-केन्द्रित दिमागीपनले यो कुरा गर्दछ। तपाइँ राम्ररी जान्नुहुन्छ कि तपाईले तपाइँको वेबसाइटको कारणले गर्दा कुन चीजको कारणले सबैलाई मोडिदिनु भएको हो भने; लेखहरूको प्रकाशन डेटा प्रकाशित गर्नुहोस् र यति। अर्कोतर्फ, मैले तपाईंको छोरालाई कहिल्यै पाएको छैन र तपाईंको पुत्रको सम्बन्धको बारेमा कहिल्यै केहि प्रकाशित गरें। तपाइँ यसलाई त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाई अब मेरो टिप्पणीमा एक टिप्पणीकारको प्रयोग गर्नुहुन्छ, मैले टिप्पणी गरेको छु, मैले मेरो विरुद्ध स्मियरको परिणामको रूपमा। यो सत्य होइन, किनकी तपाईंले पहिले भन्दा लामो मितिको सुरुवात गर्नुभयो।
एक रिपोर्ट मात्र स्वीकार्य छ यदि न्यायिक अधिकारीहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सूचित गर्छन् र यदि जेरोन हग्वेजीजले यसलाई विकृति र झूट भरिएको वेबसाइटमा रिपोर्ट गर्दछ भने। तथापि, मैले अझै पनि पाइप लाइनमा भएको भन्दा अन्य प्रहरीबाट प्रतिक्रिया पाएको छैन।
7 मई 2019 मा 12: 15
ओह र मेरो बहाना छ कि म तपाईंलाई जेरोन बुला राख्छ। यो सबै धेरै भ्रमित जेरोन एक पटक आक्रमण गरेर र केही वर्ष पछि तपाईं अचानक एक महिला हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं स्वयं इन्टरनेटमा झुकाएको छ भने तपाइँ परिवर्तन परिवर्तन प्रक्रियामा जानुहुन्छ र त्यसपछि मनोचिकित्सा प्रशिक्षणमा भर्खरै कसरी सम्भव छ? तपाईं चयन प्रक्रिया अघि जानु अघि तपाईं देख्नुभएको छ? वा त्यो सामान्य मनोवैज्ञानिक व्यवहार हो?
7 मई 2019 मा 12: 21
मैले घोषणा गरे कि मैले आफैले यसलाई संचार गरे। निस्सन्देह तपाईं मेरो रक्षाको जवाफ नदिनुहोला, किनकि तपाईसँग गम्भीरतामा लिने एक पैदल छैन। यदि तपाईंले इन्टरनेटमा राख्नु भएको कुरा अर्को कुरा पुलिसलाई संवाद गर्नुभयो भने, त्यो मुख्यतया तपाईको बारे केहि भन्छ। मैले झूटो घोषणाको साथमा लेखेको छु कि तपाईले पूर्ण विवरणमा प्रकाशित गर्नुभएको छ, वास्तवमा र राम्रो अन्तस्करणमा, र मैले लिंक माथि राखेको छु कि तपाईले मुख्यतया झूटो कुरा के पढ्न सक्नुहुन्छ, कल्पना गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् र आफैंलाई झूटो आरोप लगाउनुहोस्। जाहिरा तौर मा पुलिस धेरै फरक नहीं सोचता, अन्यथा म अभियुक्त भएको थियो। तपाईंसँग कुनै मामला छैन।
हामीले साँच्चै तपाईंलाई मानिसहरूको टोलीको साथ जाँच गरेका छौँ जुन तपाईले साढे वर्षमा तपाईलाई क्षति पुर्याएको छ। "खाली" होइन, तर तपाईंको बारेमा तथ्यहरू रोक्न, तपाईंको आपराधिक रेकर्ड, तपाईंको दिवालियापन र तपाइँ महिलाहरूलाई कसरी दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ। तपाईं एक आपराधिक, दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति हो, तपाईंले पछि विनाश को एक निशान छोड्नु भएको छ, ताकि कहीं बन्द गर्नु पर्छ। हामी आंशिक रुपमा यसमा सफल भएका छौं र हामी ईमानदार भई आशा गर्दछौं कि तपाई केहि कुरामा तपाईंको पाठ सिक्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं साँच्चै मेरो छोरामा आउनुभएको छ, तपाईंले उनको लेख र मेरो एक लेखमा राख्नुभयो। त्यस लेखको अन्तमा मेरो छोरा सबैभन्दा खराब तरिकामा धम्की दिइयो। चासो गर्ने व्यक्तिले मैले सम्बद्ध लेखमा स्क्रिनशटहरू फेला पार्न सक्दछ। त्यसैले तपाईं झूट बोल्नुहुन्छ। फेरि, म "निष्पक्ष खेल" हुँ, तपाईं मलाई साँच्चै छुटाउन सक्नुहुन्न। तर तपाईं मेरो छोराबाट टाढा रहनु भएको छ र तपाईंले अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसोभए तपाईंको समस्या छ र मार्कको लागी जब तपाईं मेरो लागि मेल खाँदैनन्।
तपाइँ कति वर्ष पहिले यो घोषणा फेरि गर्नुभयो? तपाई प्रायः तपाईंको साइटमा संकेत गर्नुभयो कि प्रहरीले अभियोग गर्न चाहँदैन, तपाइँले यी वकीलहरूसँग सम्पर्क गरेन यो केहि गरेन, त्यसैले यो अर्थ बुझ्छ कि मैले तपाईंको रिपोर्ट स्वीकार्य छ? मेरो लेखमा आधारित छैन तर तपाईंको आफ्नै शब्दहरूमा आधारित।
7 मई 2019 मा 12: 36
झूटो बोल्नु र जेरोन चलिरहनुहोस्।
यदि यो तपाईं र तपाईंको टोलीमा थियो भने, उदाहरणका लागि, म कैदीमा थिएँ। सबै बकवास। एक दिन अझै छैन!
म ट्याब्लेटमा रहेको व्यक्तिले मेरो सम्पर्कमा मेरो बारेमा गलत कथन गर्न सम्पर्क गरे। म बुझ्छु कि तपाईलाई प्रतिक्रिया नदिनु, तर पीडितको भूमिकामा डुब्न प्रयास गर्नुहोस् किनभने मैले तपाईंको छोरालाई आक्रमण गरें। तपाईं र तपाइँको छोराको त्यो तस्वीर कहाँ छ? म बेल्टको अधीनमा छु र म अझै पनि त्यो आवश्यकता छैन।
ओहो हाँ र मैले क्रेडिट कार्ड धोखाधडी गरेको छु ... जबसम्म मैले प्रमाण प्रकाशित गरे कि यो बकवास थियो। त्यसपछि त्यो कथा तपाईंको बिस्तार बिस्तारै बचत गर्न पुनः मेटाईयो।
तपाईं कुत्तेको रूपमा जंगलमा जानु भएको हुनाले तपाइँले पनि भन्न सक्नु भएको छ कि म तपाईंको छोराको बारेमा केहि प्रकाशित गर्दैछु (जुन मैले कहिल्यै गरेन, तर मैले टिप्पणी गरेका थिए)। तपाईंले जाहिरासाथ यो विशेषता हराउनु भएको छैन। तपाईं आफ्नो स्वापिच वेबसाइटमा उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो वास्तवमा एक विश्वसनीय स्रोत होइन, किनभने त्यहाँ तपाईले जस्तै गर्नुहोला: जुन चीजहरू गलत छान्नुहोस् र यसलाई सत्यको रूपमा ल्याउनुहुन्छ, तथापि तिनीहरू तथ्याङ्क छैनन्।
मलाई थाहा छैन यदि तपाईं यहाँ थप प्रतिक्रिया दिन चाहानुहुन्छ, तर जहाँसम्म मलाई चिन्ता छ, हामी पनि अदालतमा गर्न सक्छौं। मैले पहिले नै संदिग्ध वकील ल्याए। मैले यस ह्यान्डस-नोटस बहसको उपयोगितालाई यस तरिकामा देख्न पाएको छैन, यसको बाहेक तपाईले देखाउनुभएको छ कि तपाई अझै पनि तपाईको वरिपरि बेईमानीलाई धम्की दिइरहनुभएको छ, कसम गर्न र हिँड्ने। तपाईं कानून भन्दा माथि हुनुहुन्छ, के हो?
7 मई 2019 मा 12: 35
यदि अविश्वसनीय क्षण तपाईले न्यायिक प्राधिकरणको साथ भर्ना गर्न आउनु भएको छ र तपाईले मलाई संस्थामा एक हेरविचार प्राप्तकर्ताको रूपमा समाप्त गर्नुहुनेछ, तपाईले पाउनुहुनेछ कि मलाई प्रिय साथी प्रदायक हो जसले तपाईका सँगी रोगीहरुलाई विश्वास गर्दछ। तपाईं मलाई बिल्कुल थाहा छैन।
र यदि तपाईं हाम्रो साथ सहज हुनुहुन्छ भने, ताकि अब तपाई आफैं वा अरूलाई खतरामा रहन सक्नुहुन्न, म निश्चित रूपमा एकदम फरक टोप लगाउनेछु। मलाई मेरो छोराको रक्षा गर्न वा क्षति नगर्नुको कारण छैन। यद्यपि केही पनि गलत छैन। जबसम्म तपाईं आफ्नो औषधिको समयमा समय लिनुहुन्छ।
7 मई 2019 मा 12: 42
हो साँच्चै। त्यो एक महान पल फेरि हुनेछ! नाओमीबाट मेरा गोलहरू र इंजेक्शनहरू पाउनुहोस्!
यो हाइलाइट जस्तो देखिन्छ!
7 मई 2019 मा 12: 51
वैसे, तपाईंको 'हेरचाह प्राप्तकर्ता' बाट सुन्दर ओरलियन न्यूजपेक। निस्सन्देह म व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको 'हेरविचार' (वा अरू कसैलाई) को लागी यदि अदालतको आदेशले लगाएको हो भने कहिल्यै सोच्दैन। लगायतका केहि चीजहरू तपाईंको आफ्नै प्रश्नको रूपमा देख्न सकिँदैन, तर अहिल्यै, त्यस पल मा अवश्य नियन्त्रण गर्ने मनोवैज्ञानिक रोगी।
यसैले म तिम्रो बारेमा फेरि देख्नेछु। तपाईंको लागि अद्भुत क्षण देखिन्छ!
अतिथि, तपाईंले अतीतमा संकेत गर्नुभयो कि तपाईं अटकिएको थियो। चाहे त्यो पुलिस कक्ष थियो, एक हिरासत केन्द्र वा जेल, मलाई थाहा छैन, तर तपाई एक्लै कैदी हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफैंलाई स्क्यान र रंगहरूमा बताउनु भएको छ।
7 मई 2019 मा 13: 02
के म झूट बोल्न सक्छु? स्रोत कृपया।
बस झूटो मानिसलाई रोक्नुहोस्। धेरै राम्रो।
7 मई 2019 मा 12: 55
म तपाईंसँग सहमत छु कि टियर "हेरचाह प्राप्तकर्ता" एक अवेलियन न्यूजप हो; माफ गर्नुहोस्, व्यावसायिक विरूपण। मेरो प्रशिक्षणमा उनीहरूले त्यो शब्द प्रयोग गर्छन्, तर यो किनभने म सबै प्रकारका हेरचाह र नर्सिङका विद्यार्थीहरूसँग कक्षामा हुनुहुन्थ्यो र हामी सामान्य प्रकारका सामान्य शब्दहरू प्रयोग गर्दछौं। काममा, हामी स्वाभाविक रूपमा तपाईंको "रोगी" जस्तै कसैलाई कल गर्छौं।
7 मई 2019 मा 13: 05
तपाईंको व्याख्याको लागि धन्यबाद। म हेर्न चाहन्छु कि तपाईं एक मायालु नर्स हुनु पर्छ।
भाषण को भ्रम माफ गरीएको छ।
बहिनी नाओमीले तपाईंलाई प्रेमको साथ व्यवहार गर्दछन्। म उन मान्छेहरूलाई हेर्ने छैन जुन, भित्रका सबै अपराधहरूमा, किनभने मैले उनीहरूको बिरामीको रूपमा हेर्छु।
म यो दोषी खोज्छु कि तपाइँ आफ्ना समस्याहरू चिन्नको लागि इन्टरस्पेसटेसनको सम्झना गर्नुहुन्छ, सहयोग खोज्न र तपाईंको व्यवहारको साथ समाजमा सहन जारी राख्नुहुन्छ। वैसे पनि, त्यो तपाईंको व्यक्तित्व को एकदम महत्वपूर्ण narcissistic घटक को फिर्ता फिर्ता जान सक्छ।
7 मई 2019 मा 12: 58
म कसैलाई परेशान गर्दैन। न समाज।
मैले भर्खरै मेरो विचार लेखेको छु। यसलाई 'अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता' भनिन्थ्यो। तपाईं सहमत हुन वा असहमत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि मात्र एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले के गर्नुभयो (तपाइँ जो पनि स्पष्ट रूपमा संकेत गर्नुहुन्छ) कसैलाई हटाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ किनभने तपाईं त्यस रायसँग सहमत हुनुहुन्न।
यो अनावश्यक काम को माध्यम ले एक राय को दबाने को प्रयास हो।
म स्वीकार गर्न सकिनँ कि म गल्ती गर्न सक्छु र गल्तिहरु गर्न सक्छु। म यो अयोग्य सत्य छ भनेर भन्न अन्तिम व्यक्ति हुँ। ब्लग मा आफ्नो राय देएर आफ्नो सोच को उत्तेजित गर्दै भन्छन् "यो अविश्वसनीय सत्य हो र तपाईंलाई यो तरीका मान्नु पर्छ"।
तपाईंको विचार अपराध भएको बेला देखि। हो, म बुझ्छु कि यो सम्भवतः निकट भविष्यमा यो मामला हुनेछ, तर मलाई लाग्छ कि तपाईं आफ्नो विचार लेखेर एक कदम अगाडी गए र व्यक्तिगत आक्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। मैले बुझेको छु कि तपाईंसँग यो अपराधबाट स्वत: स्वतन्त्रता छ।
तर बहिनी नाओमी औषधी रोगीहरूको तिर राम्रो मायालु हुन सक्छ। मेरो मा हरेक विश्वास छ। तपाईंको लागि कस्तो अद्भुत स्थिति हो। कुनै पनि अवस्थामा, तिनीहरू तपाईंलाई विरोध गर्न सक्दैनन्, किनकि त्यहाँ सधैँ विन्डो र केही अतिरिक्त गोलहरू बिना कोठा छ।
7 मई 2019 मा 13: 12
@ नाओमी / जेरोन वा अन्य
आफ्नो भाषा माथि माथि उल्लेख गर्नुहोस्, yelled:
"म तिमीलाई चिन्ताजनक थियो, अनासको दु: खको आमाको पूर्णतया बेपत्ता शोषणको बारेमा। यसले तपाईंलाई गहिरो र कम व्यक्ति बनायो। तपाईं कि नग्न पुलिस रिपोर्ट संग कसरी निपटने मुख्य रूप देखि थाहा छ कि तपाईं जानकारी को अप्रत्याशित प्रतिलिपि मा बेवकूफ कसरि हो। "
प्रहरीको रिपोर्टले मार्टिनलाई विस्तारमा सुनेको छ र हेर्नुहोस् कि आमा माधव आरोगले मार्टिन आफैले दिए।
उनी आमालाई मदत गर्न चाहन्थे र त्यो समय मार्टिनभ्रिजल्याण्ड वेबसाइटको अभिलेखबाट भोग्न सकिन्छ।
कहिलेकाहीँ उसले आमालाई असाध्यै अनौठो पुलिस रिपोर्ट गरेर अविश्वास गर्नुपर्ने थियो, निस्सन्देही होइन, उसले स्वाभाविक रूपमा आमालाई विश्वास गर्यो।
तर चाँडै यो रिपोर्ट सकियो कि रिपोर्ट असंभव थियो किनकि यो सम्भव छ कि पुलिस रातो रातो दर्शक, कुत्तों, घोडाहरू र हेलिकप्टरहरूले शरीरलाई (एक टाउकोबाट फाँटेर) भेट्टाउन सकेन जब सम्म एक रोजर नौ मा हुन्छ बिहान, यो रिपोर्ट सही हुन सक्दैन। यदि आमाले यस्तो रिपोर्ट प्राप्त गर्दछन् भने, त्यसोभए उनको अभिनव आमा अलार्म घडीहरू बन्द हुनुपर्छ, तर यसको कुनै पनि होइन ...
तर यो साँच्चै अनौठो छ कि आमा आमा साँझ सोफेमा बसिरहेका बेला उनी पुलिस गए अनि उनलाई हराएको रिपोर्ट गरे। आमाको रूपमा तपाईं आफ्नो छोरामा चिल्लाउँदै जानुहुन्छ।
र आमाको रूपमा जब तपाईंले आफ्नो छोराको फोटो हेर्नुहुन्छ भने, "तपाईले देख्नुहुन्छ: तिनी तयार थिए"
सबै प्रदर्शन र अधिक ...............। >>>>>
मेयर होकेमा पनि टिभिमा एक कार्यक्रममा भने, "हो, यो रहस्य हो कि केटा नौ बजे बिहान बिहान भेट्टाएपछि साँच्चिकै एउटै स्थानमा सबै रात खोजिएको थियो। साँच्चै अजीब छ।
एक रहस्य पनि छ जब अन्नाका बहिनीले कहिल्यै शोक देखाउन सकेन, उनीहरूले फौजदारी कारको पछि हँसिरहेका थिए (तस्विर पुरालेख हेर्नुहोस्) र छिमेकीका केटाकेटी पनि यो अचम्म लागेन कि उनको कुनै वास्तविक शोक थिएन। (एक शुद्ध खोज )
अजीब कुरा हो कि आमाले न्यायको निर्माणलाई स्पष्टीकरणका लागि श्रृङ्खलामा राख्नुभएन, अजीब छ कि उनी केहि हप्तामा तीनवटा विभिन्न वकील थिए।
यो पनि अजीब छ कि अन्ना पड़ोस मा एक टैक्सी चालक संग कुरा गरे कि त्यो गायब हुनेछ (या टैक्सी चालक एक एजेंट थियो, जो जानता छ)
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी थिईन। उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ।
के आमाबाबु अब स्पष्टीकरणको लागि सीमामा गएका छन्, होइन? त्यसोभए उनीहरुका अनुसार उनीहरु एक अर्काको साथमा रहेका छन्। Niburu.co, etcetera
अन्नाका कारणले हामी शंका गर्दछौं
शो मा गए, आमा कहाँ थियो?
7 मई 2019 मा 05: 47
वैसे पनि मनोरंजन Martijn को लागि धन्यवाद। यो आउँदैछ!
मैले पत्ता लगाए कि ल्यूफेरेरियन मजाकहरू वास्तवमा उल्लङ्घन।
7 मई 2019 मा 06: 16
वैसे पनि, तपाईं यी प्रतिक्रियाहरू पोस्ट गर्न हिम्मत नगर्नुहोला। तपाईं आफ्नो मुख आफ्नो "फिर्ता सीधा" को बारे मा बन्द राख्नु पर्छ, तर सत्य निश्चित छ कि कुनै ईमानदारी, न्याय र निश्चित रूपमा तपाईं मा कुनै सम्मान छैन। तपाईं केवल गर्न सक्नुहुने एकमात्र चीज खतरनाक विपरित फैलिएको छ र आफैलाई बाहिरका सबै चीजहरूको दोषी खोज्छ। तपाईंसँग सीधा फिर्ता छैन, तर एक बेकार व्यक्तिको हम्प।
7 मई 2019 मा 07: 06
संयोग, यो "अनछुटे" र "अनछुटे" छैन, मोङ्गोल। तपाई मुख्यतया आफैंलाई एक पढाइको व्यक्तिको रूपमा उजागर गर्नुभयो।
7 मई 2019 मा 10: 42
अहिले डी वा टी संग अनलक छ, तपाई बुझ्दनुहुन्छ।
मस्को एक कि केडीई वा एक संग छ, अब तपाईं अब देखि थाहा हुनेछ।
चलो, यार, थोडा स्पोर्टी रहन, हामी शिकायत गर्नुहुन्न कि भगवानले तिम्रो साथ गल्ती गर्यो, तपाईं राम्रो तरिकाले सुधार गर्न सक्षम भएन, के हो, यो हो, यो हो?
तपाईले आफ्नो भित्तालाई खाली ठाउँमा कसम गरेर देखाउनुहुन्छ।
मङ्गोलियन वा डाउन सिंड्रोमहरू सुन्दर छन्, तपाईले पनि त्यसमा पनि बदलिनु पर्दछ
7 मई 2019 मा 08: 50
अनि निस्सन्देह तपाईं एक कुकुर कुत्ता हुनुहुन्छ, जस्तै कुनै पनि अन्य महिला शत्रु, जो पनि अत्यन्त चिंतित, कमर र पिडा खारेज गर्न वा जवाफ पठाउँछन्। मलाई आशा छ कि तपाईंले यो व्यवहारलाई दण्डयोग्य बनाउनुभएको छ।
के तपाई साँच्चै मलाई फेरि प्रक्षेपण गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं यसको लागि माग गर्दै जस्तो लाग्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईं पहिले नै त्यहि हुनुहुन्छ जहाँ म तपाई चाहन्छु र तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, यस समाजको कचरा बिनमा। मलाई अब केहि गर्न को लागी छैन।
7 मई 2019 मा 13: 50
र त्यसैले तपाइँ फेरि फेरि देख्नुहुन्छ कि हामी यहाँ साइटमा छौं, हामी बन्द गर्न बाहिर बन्दरको पर्खाइ पर्थ्यो। हग्वेवीज जस्ता तथ्याङ्कहरू नेदरल्यान्ड्स एक अत्यन्तै अयोग्य देश बनाउनको लागि राम्रो तरिकाले छन्। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। तपाईले तपाईको ब्लगको बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ। मदन भण्डारी
7 मई 2019 मा 20: 36
यो फेरि प्रशिक्षक हो, तपाईं यस व्यक्तिबाट देख्न सक्नुहुन्छ कि उहाँले प्रदुषित, जहरीला घृणा र आत्म-केन्द्रित हुनुहुन्छ। भेदभाव, अपमानजनक, झूटो लेखहरू, आदि संग आक्रमणको पूर्ण। यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि यो व्यक्ति धेरै गम्भीरता संग सम्बन्धित छ। एक समाजको लागि खतरनाक व्यक्तिहरू, बन्दर यसको आस्तीनबाट आएको छ।
"तपाईं वास्तवमा जहाँ म तपाईं चाहनुहुन्छ र जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ, यस समाजको कचरा बिनमा हुनुहुन्छ।"
यसले संकेत गर्दछ कि यो व्यक्तिले मानिसलाई कडा सानो बनाउँछ र त्यो व्यक्तिले पनि सोच्न सक्दछ कि उनीहरूले कुनै पनि टाउको दुखेको छ। धेरै मनोवैज्ञानिक र डरलाग्दो। धेरै मानिसहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर हेर्छन्। केवल पाठबाट तपाईले सबै टावरहरू पाउनु भएमा तपाईसँग त्यस्तो कुराकानी भएको वास्तविक वार्तालाप हो भने, तपाईं कहीं पनि घृणा गर्न सुरु गर्नुहुने छ। यो कसरी त्यस्तो चरित्र हो भन्ने उदाहरण हो
र त्यहाँ धेरै मा madurodam र अगाडी मा धेरै छन्।
र तपाईं जारी राख्न सक्नुहुन्छ, तर यो केवल एक छोटो प्रतिक्रिया थियो।
« ठूला वैकल्पिक मिडिया वेबसाइटहरू विरोधमा नियन्त्रणमा छन्
जुली वान एस्पेन, बेल्जियम एनी फेबर र हत्यारा स्टीव बी। नवीनतम पीएसओपी मा बेल्जियम माइकल पी। »
कुल भ्रमण: 12.435.686